छिमेकी होस त चिन जस्तो, को’रोना वि’रुद्ध लड्न चीनले रु. एक अर्बको स्वास्थ्य सामग्री दिने । – Yuwa Aawaj
बैसाख १६, २०७८ बिहिबार 924
Prevहरियो केराउ खानुका अचम्मैको १० फाइदाहरु ।
Nextहवाई यात्रुले विमानस्थलका प्रिपेड ट्याक्सी घरमै बोलाउन पाउने !
अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ : राष्ट्रियताको रक्षाका लागि अन्तिमसम्म ल’ड्नुपर्छ ।
खुशीको खबर – नेपालबाट तिब्बतसँग जोड्ने सुरुङ मार्गको डिजाइन तयार ।
महा विप-त्तिमा यस्तो महान काममा लागेका रहेछन् डाक्टर गोविन्द केसी, दुई सातापछि आउँदैछन् नेपाल ।